You're Na-eme Ya Njọ! | Martech Zone
Do Na-eme Ya Njọ!
Wenezde, August 19, 2009 Sunday, Eprel 24, 2016 Chris Lucas kwuru
Dị ka ndị ahịa anyị niile maara nke ọma otu o siri sie ike ịgbanwe omume ndị mmadụ. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị sie ike ị ga-anwa ime. Ọ bụ ya mere Google, ka ọ dị ugbu a, ga-enwe ọ continuedụ na-aga n'ihu na nyocha ọ bụla, n'ihi na ndị mmadụ maara "Google ya" mgbe ha chọrọ ịchọta ihe na weebụ.
N'ịmara nke a, enwere m mmasị na ọnụ ọgụgụ ndị m na-ahụ na Twitter na blọọgụ na-agwa ndị ọzọ na ha na-eji Social Media emehie. Ihe na-atọkwu m ụtọ bụ na ndị a bụ ndị na-arụ ọrụ dịka ndị ndụmọdụ ma ọ bụ na ụlọ ọrụ, ma ọ bụ PR, Marketing, ma ọ bụ Social Media.
Wantchọrọ ihe nzuzo na otu esi aga n'ihu Social Media ma nyere ụlọ ọrụ aka bulie azụmaahịa ha n'ịntanetị? Kwụsị ịgwa ndị mmadụ na ha na-eme ya na ezighi ezi bido ịgwa ndị mmadụ etu ha ga - esi mee ya nke ọma. Onweghi onye choro ka agwa ha na ha mehiere, ha choro ima otu esi eme ka ahia ha di nma. Ọ bụ ụzọ dị mfe iji zụlite azụmahịa gị ma hụ nnabata mma nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta na ọkwa ụlọ ọrụ.
Anyị niile na-amụ otu esi eji ngwa ọrụ ndị a, na-enye ndị mmadụ ike ma na-elekwa azụmahịa gị anya.
Tags: ezighi eziiwuna-elekọta mmadụ media iwuezighị eziị na-eme ya na-ezighi ezi
Chris Lucas kwuru
Nzọụkwụ 25 iji nwee ihe ịga nke ọma: njikarịcha njin nchọta na ịde blọgụ azụmahịa
Brody PR: Mgbe ị ga-agbanye ụlọ ọrụ mmekọrịta gị
Ọgọstụ 19, 2009 na 4:06 ehihie
Ekwenyere m. Emere m post na nso nso a akpọrọ "Social Media Achọrọ m onye nkuzi?" M na-ahụ ka ndị nwe ụlọ ahịa na-eche echiche ma ọ bụ malite itinye aka na mgbasa ozi mgbasa ozi mana chọpụta na enwere ntakịrị nkwụsị. Ụfọdụ na-enweghị isi na ndị ọzọ na-emebi ikike nke mgbasa ozi ọha mmadụ. Nye ọtụtụ "ndị ọkachamara" na-azọrọ na ha bụ ọkachamara ma ọ bụ na-ekwe nkwa nsonaazụ ha onwe ha enwetabeghị. Na enweghị ihe ọmụma na oge iji mụta ihe, a na-ere ndị nwe ụlọ ahịa naanị. M na-agbaso ma na-asọpụrụ ndị nọ na mgbasa ozi ọha na eze dị ka a ga-asị na m na-elegara ha anya dị ka onye na-ahụ maka ego. Ọ bụrụ na onye na-ahụ maka ego enwetabeghị onwe ya n'ụzọ ego, kedu ka ha ga-esi gwa m.
M ga-enwe ekele maka nzaghachi ọ bụla na blọọgụ m http://yougonetwork.com/johnnie_firari/2009/08/so… Ihe dị ka onye nwe azụmaahịa m ka na-akpụzi ma na-arụ ọrụ itinye aka na ya. Daalụ.